Galaxy Tab S6 vs Galaxy Tab S5e: Farqiga u dhexeeya labada | Androidsis
Galaxy Tab S6 vs Galaxy Tab S5e: Maxaa iska beddelay dhexdooda
Eder Ferreño | | Samsung, Kiniiniyada Android
Samsung waa sumadda ugu muhiimsan ee aaladda kiniiniyada Android. Calaamadda Kuuriya waxay haysaa buugga ugu ballaadhan suuqa, marka loo eego shalay Galaxy Tab S6 ayaa lagu balaariyay kiniinkiisa cusub, kuwaas oo qeexitaanadooda aad ka arki karto halkan. Waa bilowgii ugu dambeeyay ee shirkadda illaa iyo sanadkaan, kaasoo horayba nooga tagay dhowr nooc illaa iyo hadda.
Garabkan 'Galaxy Tab S6', waxaa jira nooc ka soo baxay gaar ahaan astaanta Kuuriya, waa maxay Galaxy Tab S5e. Kiniinkan Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay bilawgii sanadkan, oo ah mid ka mid ah moodooyinka ugu xiisaha badan Samsung, marka lagu daro muujinta cusboonaysiinta noocyadeeda kiniiniga ah.
Dareenkan, waxaan arki karnaa inay jirto isbeddel gaar ah oo u dhexeeya labada qalab. In kasta oo kaniiniga cusubi uu yahay kan ugu sarreeya ee kala duwan, kiniin sare oo dhammaad ah oo loo yaqaan inuu xukumo qaybta. Qaabka kale ayaa ah mid loogu talo galay bartamaha, in kasta oo arrinta la yaabka leh ay tahay in ay jiraan waxyaabo ka dhexeeya labada.
Galaxy Tab S5e iyo Galaxy Tab A 2019 ayaa laga bilaabay Spain
1 Naqshadeynta aan isbeddelin, muujinta iyo batariga
2 Dareenka faraha ee shaashadda ee Galaxy Tab S6
3 Processor, RAM iyo keyd
Naqshadeynta aan isbeddelin, muujinta iyo batariga
Labada kiniin ee Samsung waxay leeyihiin naqshad isku mid ah, marka lagu daro isticmaalka labada xaaladood ee 10,5-inji Super AMOLED oo leh xallinta WQXGA. Marka waxaan arki karnaa in shaashad ballaaran la soo bandhigay, taas oo bixisa tayo aad u wanaagsan oo lagu awoodi karo in lagu arko nuxurka maaddooyinka badan leh, taas oo shaki la’aan ah wax muhiim ah.
Sidoo kale, labadaba Galaxy Tab S6 iyo Galaxy Tab S5e Waxay leeyihiin awood batari ah 7.040 Mah. Batariga nooga tagaya ismaamul wanaagsan kiisaskaas, si wanaagsan loo isticmaalo, ha ahaado mid shaqeynaya ama wax ka cunaya. Sidoo kale dhanka isku xirnaanta waxaan kaheleynaa kala duwanaansho yar oo udhaxeeya labada, oo leh 4G / LTE ama ikhtiyaarro isku mid ah oo WiFi ah, taas oo markaa noo ogolaaneysa inaan doorano ikhtiyaarka uu mid waliba u arko inuu ugu habboon yahay
Faahfaahin kale oo meesha wax badani ka wada jiraan, laakiin isku mid ma aha, waa kamaradahaaga. Galaxy Tab S5e waxay la timid kamarad dhinac kasta ah: 13 MP xagga dambe iyo hore 8 MP. In kasta oo xaaladda Galaxy Tab S6 aan ka helayno hore 8 MP, oo laga yaabo inay tahay isku shidma iyo gadaal labalaab ah, oo ah 13 + 5 MP. Marka waxay ku qalabeeyeen dareemayaal dheeri ah gadaashiisa.
Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay Galaxy Tab A 8.0 (2019)
Dareenka faraha ee shaashadda ee Galaxy Tab S6
Mid ka mid ah isbeddelada weyn ee aan ku aragno markii la bilaabay Galaxy Tab S6 waa meesha uu ku yaal dareeraha faraha. Tan iyo markii kiniiniga-dhamaadka sare ee cusub ee sumadda Kuuriya wuxuu ku darayaa shaashaddaada, sidaan ku aragnay taleefannadooda sare. Waxay markaa noqotaa mid ka mid ah kiniinnada ugu horreeya ee suuqa si ay u helaan marinnada astaamahan. Sidaa darteed, waa horumar muhiim u ah shirkadda.
Xaaladda Galaxy Tab S5e, Dareeraha sawirka faraha ayaa ku yaal dhinac dhinac. Waa meel si caddaalad ah ugu habboon marka loo eego kiniinka, kaas oo kuu oggolaan kara isticmaalka wanaagsan. Marka lagu daro u oggolaanshaha gadaasha kiniinka inuu ilaaliyo naqshad jilicsan, oo lagu sharfo qaab aad u yar oo aad u hooseeya kiiskan. Waa isla kiiska ku jira kiniinka cusub, oo naqshad fidsan ku leh dhabarka, aad uga nadiifsan.
Processor, RAM iyo keyd
Mid kasta oo kaniini ka mid ahi wuxuu gaadhaa qayb suuqa ka duwan. Tani waa wax aan si cad u arki karno haddii aan eegno qeexitaankiisa, gaar ahaan marka loo eego processor-kiisa. Galaxy Tab S5e wuxuu leeyahay processor Snapdragon 670 gudaha. A processor wanaagsan, taas oo ah mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan oo bixiya waxqabadka ugu fiican ee bartamaha-dhexdhexaad. Marka way ka sarreeysaa dhammaan kiniin wanaagsan oo lagu daawado waxyaabaha ku jira warbaahinta badan.
Dhinaca kale, waxaan leenahay Galaxy Tab S6, kaas oo leh processor-kiisa Snapdragon 855. Sidaa darteed waxay leedahay waxqabad cajiib ah kiiskan, taas oo shaki la'aan ka dhigaysa kiniin heer sare ah. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan u adeegsanno labadaba si aan u shaqeyno oo aan u isticmaalno nuxurka, iyada oo aan taas loo tusin in waxqabadka kiniinku uu hooseeyo Qeybtaan ma weydiisan kartid wax badan kiniinka.
Labaduba waxay na siiyaan isku-darka kala duwan ee RAM iyo kaydinta. Xaalada kiniiniga udub dhexaadka ah, wuxuu la yimaadaa 4/6 GB oo dhexdhexaad ah iyo 64/128 GB oo keyd ah oo gudaha ah. Inkasta oo qaabkii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay ee shirkadda Kuuriya ay naga tagtay, waxay leedahay laba isku-darka oo la heli karo: 6/128 GB iyo 8/256 GB. Marka waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar awood leh oo leh keyd wanaagsan, taas oo shaki la'aan noo oggolaan doonta inaan ku kaydinno dhammaan noocyada feylasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Galaxy Tab S6 vs Galaxy Tab S5e: Maxaa iska beddelay dhexdooda
Farkaaga mari si aad u sameyso safaf badan oo baloogyo ah oo ku baaba'aya Cube Blast Saga
OnePlus 7 Pro wuxuu helaa OxygenOS 9.5.11 Iyadoo Agabka Amniga ee Ogosto